यशैया 45 ERV-NE - परमेश्वरले - Bible Gateway
परमेश्वरले इस्राएललाई स्वतन्त्र पार्नु कोरेस छान्नु हुन्छ
45 आफैले अभिषेक गर्न भएको राजालाई यी निम्न कुराहरू परमप्रभुले कोरेसको बारेमा भन्नुहुन्छ:
“म कोरेसको दाहिने हात समाउनेछु।
राजाहरूका शक्ति लिनलाई म उसलाई सहायता गर्नेछु।
शहरका ढोकाहरू कोरेसलाई बन्द हुनेछैन,
म शहरका प्रवेशद्वारहरू खोली दिनेछु अनि कोरेस शहर भित्र जानेछ।
2 कोरेस, तिम्रा सेनाहरूले अघि बढ्नेछन् अनि म तिम्रो अघाडी जानेछु।
म पर्वतहरू मैदान तुल्य पारिदिनेछु।
म शहरका काँसाका प्रवेशद्वारहरू भत्काइदिनेछु।
म फलामका ढोकाको बारहरू काटिदिनेछु।
3 म तिमीलाई त्यो धन दिनेछु जसले अन्धकारमा बँचाउनेछ।
म तिमीलाई ती गुप्त स्थानमा जम्मा गरेको धन दिनेछु।
म यसो गर्ने छु ताकि तिमीहरूले म इस्राएलको परमप्रभु परमेश्वर हुँ, भनेर जान्नेछौ।
अनि म तिमीलाई तिम्रो नाउँले बोलाउने छु।
4 म यी कुराहरू मेरो दास याकूबको लागि गर्छु।
म यी कुराहरू मैले चुनेको इस्राएलको लागि गर्छु।
कोरेस, म तिमीलाई नाउँले बोलाउनेछु तिमी मलाई जान्दैनौ।
तर म तिमीलाई जान्दछु त्यसैले नाउँले बोलाउनेछु।
5 म परमप्रभु हुँ, म मात्र परमेश्वर हुँ।
म बाहेक अरू परमेश्वर छैन्।
मैले तिमीलाई बलसँगै लुगा लगाइदिएँ।
तर अझै तिमी मलाई बुझ्दैनौ।
6 यी कुराहरू गर्छु ताकि सारा मानिसहरूले
म नै परमेश्वर हुँ भनेर जानुन्।
पूर्वदेखि पश्चिम सम्मका मानिसहरूले म परमप्रभु हुँ भनेर जानुन्,
अनि त्यहाँ म बाहेक अरू कुनै परमेश्वर छैन।
7 मैले उज्यालो बनाएँ अनि मैले अँध्यारो बनाएँ।
मैले शान्ति बनाएँ अनि मैले कष्टहरू बनाएँ।
म परमेश्वर हुँ अनि मैले यी सबै चीजहरू बनाएँ।
8 “माथि आकाश बाट पृथ्वीमा पण्टा बर्षिन्छ,
जसरी बादलबाट पानी बर्षिन्छ, पृथ्वी खोलिन्छ,
अनि मुक्ति उत्पन्न होस्! मुक्तिको विकास हुन्छ
साथ-साथै सद्भावना बढ्छ।
म परमप्रभुले नै यी सबैथोक बनाएँ।”
परमेश्वरले आफ्ना सृष्टिलाई वशमा राख्नु हुन्छ
9 “यी मानिसहरूलाई हेर! कसले तिनीहरूलाई सृष्टि गरे त्यसबारे उसित तर्क गरिरहेकाछन्। तिनीहरूलाई हेर मसँगै तिनीहरू वहश गरिरहेका छन्। तिनीहरू माटोको फुटेको भाँडा जस्ता छन्। मानिसले, भिजेको गिलो माटो भाँडा बनाउन प्रयोग गर्छ अनि गिलो माटोले सोध्दैन, ‘मानिस, तिमी के गरिरहेकाछौ?’ चीजहरू जो बनाइन्छन। ती चीजहरूमा त्यो शक्ति हुदैन कि जसले बनायो उसलाई सोधोस्। मानिसहरू पनि गिलो माटो जस्तै हुन्। 10 एकजना पिताले नानीहरूको जन्म गराउँछ। अनि नानीहरूले सोध्न सक्तैनन्, ‘तपाईंले किन हामीलाई जीवन दिइरहनु भएकोछ?’ नानीहरूले आफ्नी आमालाई सोध्न सक्तैनन्, ‘तपाईंले किन हामीलाई जन्म दिइरहनु भएको छ?’”
11 परमप्रभु परमेश्वर एकमात्र इस्राएलको परम-पवित्र हुनुहुन्छ। उहाँले इस्राएल बनाउनु भयो। अनि परमप्रभु भन्नुहुन्छ:
“मेरा छोरा, तिमीहरूले मलाई चिन्ह दिनुहोस् भनेर भन्यौ।
तिमीहरूले मलाई मैले गरेका कामहरू देखाउनु होस् भन्यौ।
12 यसकारण हेर, मैले पृथ्वी बनाएँ,
अनि मैले सारा मानिसहरूलाई यसमा जीवन दिएँ।
मैले आफ्नै हातहरूद्वारा आकाशहरू बनाएँ।
अनि मैले सारा तारामण्डललाई आकाशमा आदेश दिए।
13 मैले कोरेसलाई शक्ति प्रदान गरे ताकि उसले राम्रो काम गरोस्।
अनि मैले उसको कामहरू सहज पारिदिएँ।
कोरेसले मेरो शहर पुननिर्माण गर्नेछ।
अनि उसले मेरा मानिसहरू स्वतन्त्र पार्नेछ,
कोरेसले मेरा मानिसहरू मलाई बेच्नेछैन्,
मैले उसलाई ती कुराहरू गर्नलाई त्यसको मूल्य तिर्नु पर्नेछैन्।”
सेनाहरूका परमप्रभुले यी कुराहरू भन्नुभयो।
14 परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, “मिश्र र कूश धनी छन्
तर इस्राएल, तिमीले ती धनहरू पाउनेछौ।
शबाईका अग्ला मानिसहरू तिम्रा हुनेछन्।
तिनीहरूको गर्दन वरिपरि बाँधिएको साङ्गलोसितै,
तिनीहरू तिम्रो पछि पछि हिंडनेछन्।
तिनीहरू तिमी समक्ष झुक्नेछन्।
अनि तिनीहरूले तिमीसित प्रार्थना गर्ने छन्।
अनि त्यहाँ अन्य कोही परमेश्वर हुनेछैन्।
इस्राएलका, परमेश्वर तिमीसँग हुनुहुन्छ।”
15 परमेश्वर, तपाईं सर्वशक्तिमान् हुनुहुन्छ,
मानिसहरूले देख्न सक्तैनन्।
तपाईं इस्राएलको उद्धारक हुनुहुन्छ।
16 धेरै मानिसहरूले झूटा देवताहरू बनाउँछन्।
ती सारा मानिसहरू लज्जित हुनेछन्।
17 तर इस्राएल परमप्रभुद्वारा बचाईनेछ।
त्यो उद्धार कार्य सदा-सर्वदा रहनेछ।
कहिल्यै पनि इस्राएल लज्जित हुनेछैन्।
18 परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ।
उहाँले आकाशहरू र पृथ्वी बनाउनु भयो।
परमप्रभुले पृथ्वीलाई यसको ठाउँमा राख्नु भयो।
परमप्रभुले यस पृथ्वीलाई खाली गर्न चाहनुहुन्न,
जुन उहाँले बनाउनु भयो!
उहाँले पृथ्वी बस्नका लागि बनाउनु भयो!
“म परमप्रभु हुँ।
म बाहेक अरू कोही परमेश्वर छैन।”
19 “म गुप्तमा बोल्दिन म खुल्ला प्रकारले बोल्छु।
मैले मेरा शब्दहरू यस संसारको अन्धकारमा लुकाईँन।
मैले याकूबका मानिसहरूलाई
यस रित्तो ठाउँहरूमा हेर भनेर भनिनँ।
म परमप्रभु हुँ, अनि सत्य बोल्दछु।
मैले भनेका कुराहरू सत्य छन्।
परमप्रभुले प्रमाणित गर्नुहुन्छ, कि उहाँ मात्र एक परमेश्वर हुनुहुन्छ
20 “त्यसकारण, हे मानिसहरू हो, तिमीहरू भेला होऊ। तिमीहरू अर्का राष्ट्रहरूबाट उम्केका छौ। मानिसहरू जान्दैनन् तिनीहरू के गरिरहेका छन्। (जब तिनीहरू काठको मूर्तिहरू बोक्छन् तिनीहरू जान्दैनन कि तिनीहरू ती देवताहरूलाई प्रार्थना गर्छन जसले तिनीहरूलाई सहायता गर्न सक्तैनन्। 21 यी मानिसहरूलाई भन, मकहाँ आऊ। तिनीहरूका आफ्ना मामला प्रस्तुत गर्दै ती कुराहरूका छलफल तिनीहरूलाई देऊ।)
“कसले तिमीहरूलाई ती कुराहरू बताए जुन धेरै बर्ष अघि घटेका थिए? कसले धेरै बर्षहरूदेखि यी कुराहरू लगातार भने? म, परमप्रभुले, मात्र यी कुराहरू भनें। म मात्र परमेश्वर हुँ। त्यहाँ के म जस्तो अन्य कोही देवता छ? के त्यहाँ अन्य असल देवता छ? के त्यहाँ अन्य कोही देवता छ जसले आफ्ना मानिसहरूलाई बचाउँदछ? अँह! त्यहाँ अन्य देवता छैन्। 22 टाढामा भएका सारा मानिसहरूले ती झूटा देवताहरू पछ्याउन छोड्नु पर्छ। तिमीहरूले मलाई पछ्याउनु पर्छ र बाँच्ने छौ। म परमेश्वर हुँ। त्यहाँ अन्य देवता छैन्। म परमेश्वर हुँ।
23 “मेरो आफ्नै शक्तिद्वारा यो प्रतिज्ञा गर्छु। अनि जब प्रतिज्ञा सत्य हो। जुन कुरा विषयमा म वचन दिँन्छु त्यो हुने नै छ। अनि म वचन दिँदछु कि प्रत्येक मानिस मेरो समक्ष झुक्नेछ। अनि प्रत्येक मानिसले मलाई पछ्याउने प्रतिज्ञा गर्नेछ। 24 मानिसहरूले भन्नेछन्, ‘धार्मिकता र शक्ति परमप्रभुबाटै मात्र आउने छ।’”
कतिपय मानिसहरू परमप्रभुसित कोधित छन्। तर परमेश्वरको साक्षी आउनेछ र परमप्रभुले गर्नु भएको कुराहरूको विषयमा बताउनु हुनेछ। यसकारण ती क्रोधित मानिसहरू लज्जित हुनेछन्। 25 असल काम गर्नका लागि परमप्रभुले इस्राएलका मानिसहरूलाई सघाउनु हुनेछ, अनि मानिसहरू तिनीहरूका परमेश्वरसित अत्यन्त आनन्दित हुनेछन्।